2 Samueri 12 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Samueri 12:1-31
12 Zvino Jehovha akatuma Natani+ kuna Dhavhidhi. Naizvozvo akapinda maaiva,+ akati kwaari: “Kwaiva nevarume vaviri vaiva muguta rimwe chete, mumwe mupfumi uye mumwe wacho murombo. 2 Mupfumi aiva nemakwai nemombe zvizhinji kwazvo;+ 3 asi murombo akanga asina chinhu kunze kwegwayana gadzi rimwe chete, duku, raakanga atenga.+ Akanga achirichengetedza riri benyu, uye rakanga richikura riri pamwe chete naye nevanakomana vake, zvose pamwe chete. Raidya chimedu chaaidyawo, rainwira mukapu yake, rairara pachipfuva chake, uye rakava somwanasikana kwaari. 4 Kwapera nguva yakati, mupfumi akashanyirwa nomuenzi, asi akarega kutora zvimwe pamakwai ake nemombe dzake kuti agadzirire mufambi akanga amushanyira. Naizvozvo akatora gwayana gadzi romurombo wacho, akarigadzirira munhu akanga amushanyira.”+ 5 Dhavhidhi akatsamwira murume wacho kwazvo,+ zvokuti akati kuna Natani: “NaJehovha mupenyu,+ munhu akaita izvi anofanira kufa!+ 6 Anofanira kuripa+ gwayana gadzi racho nemana,+ nokuti akaita chinhu ichi uye nokuti haana kunzwa tsitsi.”+ 7 Natani akabva ati kuna Dhavhidhi: “Imi ndimi munhu wacho! Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Ini ndakakuzodza+ kuti uve mambo waIsraeri, uye ini ndakakununura+ muruoko rwaSauro. 8 Ndakanga ndichida kukupa imba yashe wako+ nokuisa madzimai ashe wako+ pachipfuva chako, nokukupa imba yaIsraeri neyaJudha.+ Kudai zvakanga zvisina kukwana, ndaida kukuwedzera zvinhu zvakaita seizvi pamwe chete nezvimwewo zvinhu.+ 9 Wakazvidzirei shoko raJehovha nokuita zvakaipa+ pamberi pake? Wakauraya Uriya muHiti nebakatwa,+ wakatora mudzimai wake kuti ave mudzimai wako,+ uye iye wakamuuraya nebakatwa revanakomana vaAmoni. 10 Zvino bakatwa+ harisi kuzobva mumba mako nokusingagumi,+ nokuti wakandizvidza, ukatora mudzimai waUriya muHiti kuti ave mudzimai wako.’ 11 Zvanzi naJehovha, ‘Tarira ndiri kukumutsira dambudziko mumba mako;+ ndichatora madzimai ako wakatarira ndichiapa wokwako,+ iye acharara nemadzimai ako masikati machena.+ 12 Kunyange iwe wakazviita pachivande,+ ini ndichaita chinhu ichi pamberi pevaIsraeri vose+ uye masikati machena.’”+ 13 Zvino Dhavhidhi akati+ kuna Natani: “Ndakatadzira Jehovha.”+ Natani akati kuna Dhavhidhi: “Saka, Jehovha aregawo chivi chenyu kuti chipfuure.+ Hamuzofi.+ 14 Pasinei zvapo neizvi, nokuti chokwadi hamuna kuremekedza+ Jehovha nechinhu ichi, mwanakomana wamuchangobva kuberekerwa, chokwadi achafa.”+ 15 Natani akabva aenda kumba kwake. Zvino Jehovha akarova+ mwana akanga aberekerwa Dhavhidhi nomudzimai waUriya zvokuti iye akarwara. 16 Dhavhidhi akatanga kutsvaka Mwari wechokwadi achiitira mukomana wacho, Dhavhidhi akatsanya kwazvo,+ akapinda, akapedza usiku hwose akarara pasi.+ 17 Naizvozvo varume vakuru veimba yake vakamira paaiva kuti vamumutse kubva pasi, asi haana kubvuma uye haana kudya zvokudya+ pamwe navo. 18 Zvino pazuva rechinomwe mwana wacho akazofa. Vashandi vaDhavhidhi vakatya kumuudza kuti mwana akanga afa; nokuti vakati: “Tarirai! Mwana paakanga achiri mupenyu takataura naye, asi haana kuteerera inzwi redu; saka tingamuudza sei kuti, ‘Mwana afa’? Achabva aita chimwe chinhu chakaipa.” 19 Dhavhidhi paakaona kuti vashandi vake vakanga vachiita zevezeve, Dhavhidhi akaziva kuti mwana akanga afa. Naizvozvo Dhavhidhi akati kuvashandi vake: “Mwana afa here?” Ivo vakati: “Afa.” 20 Dhavhidhi akabva amuka kubva pasi, akageza, akazora+ mafuta, akachinja majasi ake, akapinda mumba+ maJehovha, akagwadama;+ achibva azopinda mumba make, akakumbira, vakakurumidza kumuisira zvokudya pamberi pake, akatanga kudya. 21 Naizvozvo vashandi vake vakati kwaari: “Zvamaita izvi zvinorevei? Mwana paaiva mupenyu makatsanya mukaramba muchisvimha misodzi nokuda kwake; asi mwana paangofa mamuka, mukatanga kudya zvokudya.” 22 Iye akati: “Mwana paaiva mupenyu ndakatsanya+ ndikaramba ndichisvimha misodzi,+ nokuti ndakati, ‘Ndiani anoziva kana Jehovha achizondinzwira nyasha, mwana akararama?’+ 23 Zvino zvaafa, ndinotsanyirei? Ndinokwanisa kumudzosazve here?+ Ndichaenda kwaari,+ asi iye haazodzoki kwandiri.”+ 24 Zvino Dhavhidhi akatanga kunyaradza mudzimai wake Bhati-shebha.+ Akapindawo maaiva, akarara naye. Kwapera nguva yakati, akabereka mwanakomana,+ akatumidzwa kuti Soromoni.+ Jehovha akamuda.+ 25 Naizvozvo akatumira shoko nomuprofita Natani,+ akamutumidza kuti Jedhidhiya, nokuda kwaJehovha. 26 Zvino Joabhi+ akaramba achirwa neRabha+ revanakomana vaAmoni, akakunda guta roumambo hwacho. 27 Naizvozvo Joabhi akatuma nhume kuna Dhavhidhi akati: “Ndakarwa neRabha.+ Ndakakundawo guta remvura. 28 Zvino unganidzai vamwe vanhu vose mudzike musasa paguta, muritore; kuti ini ndirege kutora guta, uye zita rangu rirege kushevedzwa pariri.” 29 Naizvozvo Dhavhidhi akaunganidza vanhu vose, akaenda kuRabha, akarwa naro, akarikunda. 30 Akabvisa korona yaMarikamu mumusoro wake,+ yairema tarenda rimwe chete rendarama, pamwe chete nematombo anokosha; ikaiswa mumusoro waDhavhidhi. Zvaakapamba+ muguta racho zvakanga zvakawanda kwazvo. 31 Akabudisa vanhu vaiva mariri, kuti aite kuti vacheke matombo uye kuti vashandise zvokushandisa zvesimbi zvakapinza+ nematemo esimbi, uye akaita kuti vakanye zvidhinha. Uye akaitira maguta ose evanakomana vaAmoni saizvozvo. Dhavhidhi nevanhu vose vakazodzokera kuJerusarema.
2 Samueri 12